China Custom fonosana volomaso fonosana malefaka vita tanana 25mm 3d Mink eyelash orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Weiti
1, volom-borona mink 100% tena ambony
2, tanana vita tanana mba hiantohana ny kalitao tsara indrindra
Kapoka lava 3, 25mm matevina
4, azo ampiasaina ary maharitra hatramin'ny fampiasana 25-30 fotoana
TAMIN'NY MINY 25MM
√ Ampitomboy ny masonao amin'ny volomaso diso
Maivana sy azo ampiasaina indray, ny kapoka vita tanana, tsy misy habibiana dia mety amin'ny fotoana rehetra sy ny endrika amin'ny maso; hanisy volavola, halaliny ary famaritana izy ireo ho an'ny valiny maharitra, fampisehoana fijanonana.
√ Namboarina tanana, lavorary
Ny volomasontsika moka mirefy 25mm dia namboarina tamin'ny asa tanana avokoa, mijery ny kalitao tsara indrindra isika, mba ho voajanahary ny curvature sy ny curl an'ny volomaso. Ny volomaso diso dia mampifangaro tsara ny volomaso voajanaharinao, mampitombo ny halavany sy ny feonao ary mamorona endrika tsara tarehy. Namboarina mba hanatsarana ny hatsaranao sy ny toetranao.
√ Azo ampiasaina indray ary maharitra
Na dia mamela anao hampiasaina hatramin'ny in-10 aza ny ankamaroan'ny volomaso mink sandoka, ny volomaso mink 25mm mink dia namboarina tsara ary azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra, in-30 ampiasaina, tsy very ny hatsarany.
√ malefaka sy ahazoana aina anaovana
Ny volomaso volomaso mink voajanahary dia vita amin'ny landy vita amin'ny landihazo, tena mora ampiasaina, malefaka ary voajanahary raha mikasika, manamaivana ny tsy fahazoana aina amin'ny fanaovana volomaso diso.
Mahery ary tsy mora manjavona
Fonosana tsara sy marika manokana
Fomba amam-pivoarana vonona isan-karazany
Fanontana logo fonosana volomaso:
1, Ho an'ny fonosana volomaso vita vita amin'ny volomaso, dia mampiasa fomba fanontana UV foana izahay
Ny fanontam-pirinty UV dia fizotran'ny fanontana izay mampiasa hazavana ultraviolet hanamainana sy hanasitranana ny inks. Ilaina ny mifanitsy amin'ny ranomainty misy photosensitizer miaraka amin'ny jiro fanasitranana UV.
2, Ho an'ny fonosana volomaso namboarina dia manohana ny fomba fanontana isan-karazany izahay
Logo tsy miankina namboarina tamin'ny fonosana, matetika izahay dia manohana ny fanontana lamba vita amin'ny landy, fanontana UV, fametahana hafanana sns. Mila milaza aminay fotsiny izay vokarinao tadiavinao ianao, dia afaka nanao araka izay takinao avy izahay.
Fanontana nohomboana hafanana
Ahoana ny fametrahana lasely diso?
Esory ao anaty boaty ny volomaso sandoka izay tianao hotehirizina ary tazomy ilay boaty mba hitehirizana mora aorian'ny fampiasana azy.
Mampiasà tweezers eyelash hanesorana ireo volomaso diso ao anaty lovia.
Mandrefy kapoka amin'ny fototry ny tsipika voajanahary voajanahary.
Teo aloha: Volomaso misy marika manokana namboarina manokana Wholesale Wholesale Fluffy 25mm Mink eyelashes
Manaraka: Label manokana ambongadiny 100% Volo-bolo vita amin'ny volom-borona vita tanana amin'ny tanana
Volomaso 25 Mm Mink
China Factory Cheap Wholesale Lashes OEM diso ...
YOLANDA Style Bulk vita tanana Mink Strip Lashes 2 ...
Super Charming 100% tanana vita 3D 25mm loko Min ...